Noqo Abaalmarinta Abaalmarinta iyo Abaalmarinta - Qaabilsan
Ogast, 2009 Microstation-Bentley, safarka
Laga soo bilaabo 12 ilaa 14 ee Oktoobar Bentley Systems waxay qaban doonaan Abaabulka iyo Abaalmarinta Hababka ugu wanaagsan ee Kaabayaasha. Dhacdadani waxay dhici doontaa Charlotte, Waqooyiga Carolina, waa kan ugu horreeya ka dib isbeddelka qaabka ah ee horey u ahaa Abaal marinta.
Maalintii koowaad, Gregg iyo Keith Bentley waxay soo bandhigi doonaan wax soo bandhigis ah waxa 25 sano ee shirkadu ay ahaayeen iyo qaybta ugu muhiimsan ee warshadaha teknoolajiyada lagu dabaqayo naqshadeynta iyo dhismaha kaabayaasha.
Qeybaha 17 ee ka qeyb qaadanaya abaalmarinta, bandhigyada waxaa lagu sameyn doonaa sadexda ugu caansan ee ka muuqda inta lagu jiro saacadaha 20 ay muujin doonaan mashruucoodii, guulihii, tiknoolajiyada codsiga iyo xalka xalinta.
Isbedelka qaabka waa mid soo jiidasho leh, sababtoo ah wixii hore u ahaa Siminaar ayaa u socday websaydh, siinta waqti ku filan ee bandhigga ka qaybgalayaasha ee abaalmarinta hore u lahaa kaliya hal guddi iyo dhowr filim oo dhacdada abaalmarinta.
Waxaa jiri doonta jawaabo su'aalo iyo jawaabo kadib bandhig kasta iyo wakiillada warbaahintu waxay fursad u helayaan inay kala hadlaan bandhigayaasha iyo dadka masuulka ka ah hay'adahan ama shirkadahaas.
Maalinta labaad waxaa jiri doona miisaska wada-xaajoodyada kala duwan ee shaqada kuwaas oo ay ku jiraan farsamoyaqaanada iyo khabiiro ka socda labada Bentley Systems iyo ka qaybgalayaasha kulanka. Waxyaabaha takhasuska leh waxay noqon doonaan dhirta, Gobollada, Dhismaha, Qalabka Madaniga iyo Teknolojiyada.
Isticmaalidda macluumaadka GIS iyo injineernimada berrinka
GIS ee diiwaanka hantida - isdhexgalka hidaha iyo isdhexgalka
Injineernimada mashaariicda korontada iyo xarumaha isgaadhsiinta
In ka badan BIM - Iskudarida kooxaha kala duwan iyo nidaamyada goobta, khariidadda, geo, madani, BIM, maareynta macluumaadka mashruuca, dib u eegida naqshadeynta digital-ka iyo isuduwidda
Ogaanshaha baahiyaha warshadaha ee isdhexgalka shaqooyinka socodka - isticmaalka tiknoolajiyada si loo xoojiyo nidaamka mashruuca wada shaqeynta, khatarta la wadaago iyo abaalmarinta.
Waxtarka sare ee maamulka xogta - hirgelinta waxgalnimada kooxo naqshadeynta iyo dhismayaasha, iyo kordhinta tayada dhismayaasha la soo sheegay.
Dardargelinta hirgelinta mashruuca (saameynta maalgashiga dhaqaale)
Dhismaha qaabeynta macluumaadka - waxqabadka madaniga ah ee mihnadlaha
Iskaashiga mashruuca iyo awoodda shaqo ee loo qaybiyey
Noqo Abaalmarinta Abaalmarinta
Laga soo bilaabo mashaariicda 1,000 laga soo bilaabo sannad-sannadka 2004, mid ayaa la siin doonaa mid kasta oo ka mid ah qaybaha hore ee 17. Dhammaantood waxay hoos yimaadaan horgeynta Hindisaha.
Jaamacadaha, Madaarrooyinka iyo qalab militari
Adeegyada iyo shabakadaha isgaarsiinta
Nidaamyada qashinka iyo shabakadaha roobka
Isku xirayaasha kooxaha mashruuca
Halkaan ayaan kuu sheegi, maxaa yeelay waxaa hadda ka maqan in ka badan bil iyo badh, waqti ku filan si aad u hesho duulimaad raqiis ah iyo hoteel meel u dhow dhacdada.
Fursadaha ... si aad u qaybsatid.
Post Previous«Previous Ka dhig AutoCAD
Post Next Farqiga u dhaxeeya Google Earth Pro iyo sawirada Google Earth oo bilaash ahNext »